Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Gobalka Shabeelada Dhexe. – Calamada.com
calamada February 13, 2017 1 min read
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday difaacyada iyo fariisimaha maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka ay ka sameysteen deegaanka Qalimow ee gobalkaasi.
Dagaalka waxaa la lsku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwanâ€™iyadoona dhawaaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay deegaano badan oo dhaca inta u dhaxeysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar oo ka wada tirsan gobalka Shabeelada dhexe.
Dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in dagaalkii xalay ka dhacay deegaankaasi uu ka mid ahaa dagaaladii ugu cuslaay ee ka dhacay deegaankaâ€™waxeyna intaasi ku dareen in dagaalkaasi lagu dilay inka badan Shan askari ooÂ ka tirsan maleeshiyaatka dowlada Federaalka.
Saraakiil ka tirsan dowlada federaalka oo la hadlay warbaahinta ayaa iyaguna dhankooda qirtay in khasaara lagu gaarsiiyay dagaalka xalay ka dhacay deegaanka waxeyna warbaahinta qaar u sheegeen in dagaalka looga dilay saddex askari.
Previous: Askar Ka Tirsan Dowlada Federaalka Oo Degmada Hodan Lagu Dilay.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 16-05-1438 Hijri.